I-FBI iphenduka ne-iPhone yenye iphekula | Izindaba zamagajethi
Impela sonke siyakukhumbula okwenzeka ngoMashi owedlule nge-FBI ne-iPhone ababefuna ukuyivula kubashokobezi abahlobene nokuhlaselwa kweSan Bernardino, kubonakala sengathi indaba efanayo ingaphindwa ngokugwazwa okwenzeke eMinnesota, ngo UDahir Adan umbhali womcimbi wobuphekula. Okwamanje esitatimendeni se-ejenti ye-FBI ichaza ukuthi uphenyo olufanele luyenziwa futhi bayabona izinketho zomthetho zokufinyelela kudatha ye-smartphone ekhiyiwe ngekhodi.
Ngasohlangothini lwakhe, lo msolwa obengubushokobezi owagwaza abantu abayishumi enxanxatheleni yezitolo eMinnesota wadutshulwa wabulawa yi-agent. Manje i-FBI ifuna ukubona yonke imininingwane esedivayisini ye-Apple futhi lena ingenye yalezi zindaba esezizwakala kithina kusukela esenzakalweni esedlule nokuthi ekugcineni zingaphela njengendaba kaSan Bernardino, nenkampani yaseCellebrite noma noma yini enye efana nokuvula i-iPhone bese ubona imininingwane ekuqukethe.
Okwamanje leli cala lifana ngazo zonke izindlela kepha ngokuqinisekile manje ngeke baphoqe isimo nenkampani ye-apula elilumwelwe ngoba sikholelwa ukuthi babecacile ngesimo sokunganikezeli ngemininingwane noma inketho yokuyithola lapho umnikazi oshonile. Ngokusobala lokhu kuyimpikiswano futhi asinakusho ukuthi benza okungalungile noma benza okuhle, bavele benze lokho abakholelwa ukuthi kuhle kakhulu kubo bonke abasebenzisi babo futhi i-FBI nayo kufanele yenze okufanayo ukuthola ulwazi futhi iqhubeke nophenyo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » I-FBI iyajika nge-iPhone yenye yamaphekula
Ngabe abantu bacabanga ukuthi i-FBI itshela i-apula ukuthi ivule idivayisi yabo? HAHAHA neqembu labaduni abanalo futhi abantu bacabanga ukuthi badinga usizo ... xD
Umgcini Weziboshwa Zamahhala weWindows kule mpelasonto